के आयो यस्तो रोग ? एकाएक बिरामी पर्न थाले मानिसहरु ? अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछी चिन्ता बढ्यो – Classic Khabar
September 10, 2021 299
चितवनका अस्पतालमा ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या बढेका छन् । भाइरल ज्वरो र मौसमी रुघाखोकीका बिरामीको सङ्ख्या बढेको हो । मौसम परिवर्तन भएसँगै अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढेको हो ।
Prevशैतानको बच्चा भन्दै बुवाले नै साथ छोडे , आमाले जसो तसो गरेर छोराको उपचारको लागि पैसा जुटाउँदै
Nextपाँच वर्षमा २३ वटा सामूहिक ह त्या : आर्थिक लेनदेन प्रमुख कारण